Iindlela ezi-7 zokunyusa ukuzibandakanya kwi-Instagram | Martech Zone
Iindlela ezi-7 zokunyusa ukuzibandakanya kwi-Instagram
NgeCawa, ngoJulayi 23, 2017 NgoMvulo, Julayi 24, 2017 Douglas Karr
Kubathengi abafuna ukwandisa ulwazi kunye nokukhulisa uluntu lwabalandeli, ukuthengisa okubonakalayo njenge-Instagram ukhokele ipakethe kuthethathethwano. Ngapha koko, iipesenti ezingama-70 zabasebenzisi be-Instagram bajonge uphawu kwiqonga, nge-62% yabasebenzisi abalandela uphawu
Le infographic evela M2 Kubanjiwe Inika iinyani, ithuba, ezinye iziseko zokuseta kunye neendlela ezisi-7 ezikunceda ufikelele kwiinjongo zakho zokuthengisa kwi-Instagram:
Veza iimveliso zakho okanye iinkonzo -Ndisandula ukugqiba iprojekthi yokudibanisa iindawo ezininzi neeMephu zikaGoogle, iigalari, kunye nezinye izinto kwindawo. Ndabelana nge Umfanekiso weskrini Kwi-Instagram. Ayikuko ukuba ndilindele ukuba ifowuni iqhushumbe, kodwa sifuna abantu abasilandelayo babone amandla ethu.
Yakha indawo yakho yokuhlala -I-Instagram ibonelela ngezixhobo ezifanelekileyo zokulandela ekufuneka uzisebenzisile. Unxibelelwano lwe-Facebook luyabhengezwa kunye nabantu abakulandelayo kwi-Instagram. Gcina ukhumbula ukuba i-Instagram inomda wokuba bangaphi abantu onokuthi ubalandele, ke wakufika apho-kuyakufuneka uqale ukungalandeli iiakhawunti ongadibani nazo.
Yandisa ulwazi malunga negama lakho -Ewe, ndiza kuhamba kancinci uye ekhohlo okanye ekunene ukufumana ilogo yam kwifoto. Ngokukrakra, ukuba uza kuthatha isithombe esihle, kutheni? Ukuqonda okubonakalayo kwentsingiselo kunceda ishishini lakho lakhe ukuthembeka. Unako, ewe, ukuhamba kancinci-kodwa ukhetho olucekeceke lweefoto ezinophawu lukhulu kwi-Instagram.
Inkcubeko yenkampani yokubonisa - Sixhasa itoni yeziganeko, iindawo, ezingenzi nzuzo, kunye nokuqala kwindawo esihlala kuyo, ke siyathanda ukubabonisa kwiakhawunti yethu ye-Instagram. Siyazithanda izinja kunye ne-bourbon… uya kuzifumana nakule Instagram yam.
Yenza intengiso kubathengi abanokubakho -Sinyanisekile ukuba asibonanga kuguqulwa ngokuthe ngqo ngokwenza intengiso ebonakalayo, kodwa sithanda ukwabelana ngomxholo wepremiyamu ngejelo. Ngelixa abantu bengenakho ukuseta intlanganiso yokuthengisa nathi, baya kukhuphela isibambiso kuthi.
Ukuphucula uphawu lokunyaniseka- Andiqinisekanga ukuba iimveliso zethu zikhulu kangangokuba ukunyaniseka ngumba, kodwa siyawuxabisa xa abantu bathanda iimveliso zethu, iinkonzo, amaqabane, abathengi, iminyhadala nolunye ushishino esenzayo. Andiqinisekanga ukuba ingasenzakalisa njani!
Hlaziya i-Instagram ngeendaba zenkampani - Ngaba ukhankanyiwe ezindabeni? Thatha umfanekiso weskrini omkhulu kwaye wabelane ngayo noluntu lwakho. Ukukhankanywa kwabantu besithathu kukuqinisekiswa kwegunya lakho kwi-Intanethi.
Ndingayaphula imigaqo (njengoko ndiqhele ukwenza), kodwa ndinayo enye Iakhawunti ye-Instagram edibanisa zombini ubomi bam kunye nobeshishini. Ndiyakuthanda ukungafihli nto kunye nokwabelana ngobomi bam kwi-Instagram, kwaye iyaqhubeka ukufumana impendulo enkulu. Uya kulufumana uthando lwam losapho, inja yam iGambino, ishishini lam, iminyhadala endiya kuyo, kwaye-ewe-uya kufumana ukutshiza nge-bourbon enkulu edibeneyo.
tags: instagramUkuzibandakanya kwi-instagramI-instagram infographicyokuthengisaIingcebiso zokuthengisa nge-instagramm2 ibanjiwe
Esi ayisisiCwangciso seNtengiso sempembelelo, Yiyeke!
Into eNtsha eNtsha yePodcast: Ngondwendwe Douglas Karr